မဟာဗန္ဓုလတံတားပေါ်တွင် BM တစ်စီးတိမ်းမှောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မဟာဗန္ဓုလတံတားပေါ်တွင် BM တစ်စီးတိမ်းမှောက်
မဟာဗန္ဓုလတံတားပေါ်တွင် BM တစ်စီးတိမ်းမှောက်
Posted by နွယ်ပင် on Dec 7, 2011 in Myanma News, News | 28 comments
ယနေ့ 7.12.11 3း45 PM အချိန်တွင်မဟာဗန္ဓုလတံတားပေါ်တွင် BM တစ်စီးတိမ်းမှောက်သွားပါတယ် ကားကတစ်စောင်းကြီး တိမ်းမှောက်သွားခဲ့ပြီး
လူအသေအပျောက်ရှိမရှိတော့ မသိသေးပါဘူး အခုချိန်ထိတော့ လူနာတင်ယာဉ်တစ်စီးမှ ရောက်တာမတွေ့သေးဘဲ မီးသတ်ကားနဲ့ ရဲကားများသာ ရောက်ရှိနေပါတယ် ..
လူသေမသေတော့ သေချာမသိသေးပါဘူး ကိုဘလက်ရေ အခုတော့ ကားကို ပြန်တည့်ပြီး ကရိန်းနဲ့ဆွဲသွားပါတယ် ။အောက်ကပိနေတဲ့သူတွေနဲ့ ဒဏ်ရာရတဲ့ သူတွေကိုတော့ အခုလေးတင် လူနာတင်ယာဉ်လာသွားတာ တွေ့လိုက်ပါတယ် .. ရုံးပေါ်ကနေစပ်စုနေတာမို့ အကြောင်းထူးရင် ထပ်တင်ပေးပါ့မယ် ..
အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ တင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါ နွယ်ပင်ရေ
တကယ့်ကို update သတင်းပဲ။
ဒီလိုပုံစံဆိုရင်တော့ ဒဏ်ရာရကြမှာ များမယ်ထင်တယ်နော်။ တုံးလုံးဖြစ်သွားတာဆိုတော့လေ… ခုတစ်လော ဒါတွေပဲ မြင်ယောင်ကြားနေမိတာ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။
BM ဆိုတာမျိုးက အခု တွေ့ရင် အသုဘ ပို့တဲ့ ကားတွေ အဖြစ်သာ သုံးကြတာ များတယ်။
အသုဘ ပို့တဲ့ ကားတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်။
ကြားရသလောက်ကတော့ သံလျှင်ဘက်ကိုပြေးတဲ့ BM ကားပါတဲ့ ကားစပယ်ယာတော့ နေရာမှာတင် ပွဲချင်းပြီးသေသွားပါတယ် သွားကြည့်တဲ့ ကောင်လေးပြောတာကတော့ သေသွားတဲ့စပယ်ယာက
မနွယ်ပင်တို.များ ဘယ်အချိန်ကတည်းက အဲဒီတိုက်ပေါ်တက်ပြီး စောင့်နေလဲမသိ.. ဟဟ
ချက်ချင်းကို ဓာတ်ပုံရိုက် ချက်ချင်းကို တင်တော့တာပဲ.. ကျေးဇူးကျေးဇူး.. တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်တက်ရင်လဲ သတိထားတက်အုံးနော့
ဖြစ်လိုက်ရင် အဲဒီတံတားနားမှာ ချည်းပဲ ။ တော်ကြာ သစ်လုံးကား ပိတာနဲ့ ။ ကွန်တင်နာကား မှောက်တာ နဲ့ အခုက တော့ ခရီးသည်တင်ကားဆိုတော့ တော်တော်လေး စိတ်ပူမိတယ်။
မနက်ကတင်ပဲ သာကေတ ဘက်ကနေ ပြန်လာတာ အဲဒီတံတား မတက်ခင်
သန်လျင်ကလာတဲ့ ဘီအမ် နှစ်စီး အတင်းကာရော ကျော်ခွနေကြတာ..
ခုတော့ ဘာမှ မဟုတ် တာတွေကြောင့် စီးပွားရှာ ရင်းအသက်စွန့် ကြရပြီ..
ကြားထဲ က ခရီးသည်တွေ က အချောင်ခံ ကြရဦးမယ်…
ကြည့်လုပ် ကြပါဦး ကိုယ့်ဆရာတို့ ရယ်….
ဘီအမ်၊ ဒိုင်နာ နဲ့ ဟိုင်းလပ် ကားတွေဆို မဖြစ်မနေစီးရမှ စီးတယ်။ အရမ်းမောင်းကြလို့ ။ ဖြစ်လိုက်ရင်လဲ တုံးလုံးတွေ ပက်လက်တွေ။ နောက်တစ်ခုက အရပ်မလွတ်လို့ပါရမီတို့ လို့ ကားအကြီးကြီးပဲစီးတယ်။ အဲဒါတောင်ခပ်လန့် လန့် ပဲ ဟိုတလောက ဂတ်စ်အိုးပေါက်ပြီး ကားမီးလောင်သွားတဲ့ပုံကို ကြည့်ပြီးလန့် နေတယ်။
အတင်လုမောင်းကြတယ် အဲဒီပိုက်ဆံနဲ့ ချမ်းသာမှာလားဆိုတော့လဲ
စားရရုံပဲရှိတယ် အဲဒါနဲ့များ အန္တရာယ်နဲ့ ငါးဆယ်တစ်ရာ ကိုလဲကြတယ်ဗျ
နောက်ကမိသားစုတော့ဒုက္ခရောက်ပြီ ဒရိုင်ဘာပြေးတော့ရော စိတ်လုံစွာပုန်းနေနိုင်မှာလား
မနွယ်ပင် ၏ သတင်းထူး ကို
ဒါကြောင့် နေ့လည်က မီးသတ်ကား လေးငါးစီးလောက် ဥသြ မဆွဲဘဲ သံချောင်းခေါက် ပြီး တံတား ဘက် တက်သွားလို့ ဘာဖြစ်ပါလည်းစပ်စုချင်နေတာ။
နွယ်ပင်တို့ ရုံး အဲ့ဒီနား ဆိုတော့ ခဏ ခဏ ဓါတ်ပုံထွက်ထွက်ရိုက်နေရမယ်ထင်တယ်။
ဘတ်စကားပြိုင်မောင်းတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေရယ် ၊ Taxi အရမ်းမောင်းတဲ့ သူတွေရယ် ၊ကိုယ့်ထမင်းရှင် တွေ ကိုဒုက္ခရောက်စေတာမိှု့ ပြစ်ဒါဏ် များများ ချသင့်တယ် ။
နွယ်ပင်အား မဟာဗန္ဓုလတံတားနှင့် ပတ်သတ်သောသတင်းများ အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ရန်အာဏာကုန်လွှဲသည်။
ဒေါပုံ ဖက် တံတားအဆင်းမှာ slow down တွေ အဲ့လောက်လုပ်ထားတာတောင် ကားတွေက ဇွတ်မောင်းတုန်းပဲ….တံတားအဆင်းမှာဆို ခပ်လန့်လန့် ပဲ အ၇ှိန်သိပ်များတာ…
တယ်ဟုတ်ပါလား သဂျီးရေ … ဒါဆိုရင် သဂျီးဆီမှာ အာမခံထားမယ် … ဟဲဟဲ … ။
ကားဘရိတ်အုပ်လို့ … လက်နာသွားတာတောင် … အရိုးများထိသွားသလား ဓါတ်မှန်၇ိုက်ရမယ် ။ အရွတ်များ ပဲ့သွားပလား စစ်ရ ဆေးရဦးမယ် … ကဲပေးတော့ $ 150
အစ်မနွယ်ပင်ရေ … သတင်းထူးဆို ဂေဇက်ကတော့ ဦးပြီးသားပါပဲနော် ဟဲဟဲ
မနေ့ညက ညီမအစ်ကိုပြန်လာတော့ အဲ့ဒီပုံတွေပြသေးတယ် …သူလည်း သတင်းကြားကြားချင်းလိုက်သွားသေးတယ် … နှစ်ယောက်သေတယ်တဲ့ အစ်မရေ … ဒဏ်ရာရတဲ့ ဦးရေတော့များတယ်ကြားတယ် … သေတဲ့နှစ်ယောက်က တယောက်က စပယ်ယာ ၊ တစ်ယောက်က ခရီးသည် လွင့်စင်ကျသွားလို့ သေတာတဲ့ .. စပယ်ယာလေးကတော့ ကားက တခြမ်းစောင်းသွားတဲ့အချိန် ညပ်ပြီးသေပါသတဲ့ …. ။ တဖက်က တိုက်တဲ့ ကားက စကိုင်းနက်ရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေစီးတဲ့ကားလို့လည်းပြောသံကြားတယ် … ။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့နေရာကို သတိထားပြီးမောင်းကြတာမဟုတ်ဘူး …. ။ ကြား၇တာ စိတ်မကောင်းစရာနော် ။
etone ရေ သတင်းကဦးမှာပေါ့နော် ဖြစ်တဲ့နေရာက နွယ်ပင်တို့ အလုပ်ရှေ့မှာဆိုတော့
ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲ အပေါ်ကနေ လှမ်းပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်လိုက်တာဆိုတော့ …..
နွယ်ပင်ကြားတာကတော့ ကားကဘရိတ်ပေါက်လာလို့ ဂုန်းတံတားကဆင်းရင်
အရှိန်မထိန်းနိုင်မှာဆိုးလို့ ပြန်ကွေ့ပြီး သဲအိတ်တွေရှိတဲ့ ရဲကင်းဘက်ကို ကွေ့ရင်း တုံးလုံးလဲသွား
တာလို့ပြောကြတယ် ဘယ်ကားနဲ့မှမတိုက်မိဘဲ သူ့တစ်စီးတည်းဖြစ်တာပါ ..
ရဲကင်းကရဲကတော့ တစ်ယောက်ထဲ အရက်ထိုင်သောက်နေရင်း ကားကသူ့စီတည့်တည့်ဝင်လာလို့
ပြေးရင်း ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ သွားကြည့်တဲ့ သူတွေကပြောကြတယ် ….
ဒီနေ့ Myanmar Times က စာမျက်နှာ ၁၂ ပါ သတင်း မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားတာပါ။
(၁) ၄ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ ခန့် မှာ မထသ ၄၃ ခရီးသည် ယာဉ် မှ လမ်းပြောင်းပြန် မောင်းပြီး ရပ်နေသော ၊လမ်းဖြတ်ကူးသူ ဒေါ်ခင်ညွန့် (၇၈ နှစ်) နှင့် မောင်လျန်းထက် (၈ နှစ်) တို့အား တိုက်မိရာ ကလေးမှာ ဦးခေါင်းကြေမွပြီး ၀မ်းဗိုက်ပေါက်ကာ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင်ပင် သေဆုံးခဲ့ရသည်။
ဒေါ်ခင်ညွန့် မှာ နောက်စေ့ စုတ်ပြဲ ကာ ခါးရိုးစုတ်ပြဲသွားကြောင်းနှင့် ယာဉ်မောင်း ထွက်ပြေးသွားကြောင်း ။
(၂) ၄၄ မထသ လိုင်းယာဉ်သည် ၃ ရက်နေ့ ည ၉နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန့်တွင် အောက်မင်္ဂလာဒုံ လမ်း ဘိုခြံမှတ်တိုင် အနီး တွင် လမ်းစပ်မှ လမ်းလျှောက်သွားသူ ကို လွမ်းယု နှင့် ကို စန်းလွင်ဦး တို့အားတိုက်မိပြီး မောင်းနှင် ထွက်ပြေးရာ ကိုလွမ်းယုမှာ ဒါဏ်ရာများရရှိကာ အင်းစိန်ဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန် သွားသည် ။ ယာဉ်မောင်းအား ၄ ရက်နေ့တွင် ကားနှင့် အတူ ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း။
အရမ်းတွေ အက်ဒိတ် ဖြစ်လွန်းတယ်……
တစ်နေကွယ် သေနယ်သို့ တစ်ခါကူး မေ့လျှော့ကာ သေဘူးထင်ပါနဲ့ နေကွယ်တာ အခါများရင်ဖြင့် သေနယ်ရွာ တစ်ခါသွားရမယ် တားးးမရဘူး…